Bitsibitsika Afghana: Lesona Hampianarina & Hianarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2017 3:20 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Mey 2006 ny lahatsoratra teny Anglisy)
AfghanWarrior manome soso-kevitra ho an'ny olona ao Iraka mba hanaraka ny ohatr'i Afghanistan ka handrisika ireo mpikomy mba hametraka fitaovam-piadiana. Nanoratra izy:
“Nanomboka fandaharan'asa fandriampahalemana sy fampihavanam-pirenena ny governemanta Afgana tamin'ny herintaona ary nanome famotsoran-keloka ho an'ireo Taliban sy lehiben'ady te hametraka ny fitaovam-piadiany ary hanatevin-daharana ny governemanta. Nahomby tokoa ity fandaharan'asa ity ary nandritra ny herintaona mahery, mihoatra ny arivo ireo tafika manohitra ny governemanta nanatevin-daharana ity fandaharan'asa ity. Ka raha manomboka manao tahaka izany koa ny governemanta Irakiana vaovao, mino aho fa maro ireo mpikomy hametraka ny fitaovam-piadiany ary handray anjara amin'io fandaharana io, ary ho tombontsoan'ny vahoaka Irakiana izany. Nifidy ny governemantany sy parlemanta ny vahoaka ao Iraka ary manantena aho ankehitriny fa hiasa mafy ho amin'ny firaisankinany izy ireo ary hanadino ny maha-Sonita na Shiita – Silamo avy amin'ny firenena iray avokoa izy ireo ary firenena iray izy ireo ka tsy tokony hisy ny fahasamihafana eo amin'izy ireo, ary raha mitazona ny firaisany izy ireo, tsy ho ela dia ho resiny ireo mpikomy ary hatanjaka ny firenena. “
Nikobad (Persiana) milaza fa ohatra tsara tokony harahana ny fanapahan-kevitr'i Ahmadinejad hamela ny vehivavy handeha eny amin'ny kianja mba hijery baolina kitra. Milaza izy fa mila fahalalahana ny vahoaka saingy tsy momba ny gazety na fampahalalam-baovao ny fahalalahana tena lehibe indrindra fa momba ny hoe miaina fiainana malalaka. Nilaza Hoy koa izy fa mbola tsy mandeha any amin'ny sinema na kianja ny vehivavy any Afganistana.
Afghanistan Lord nanoratra momba ny tsy fahaiza-mitantana ao amin'ny firenena izay loharanon'ny olana. Hoy ilay bilaogera hoe:
“Mahafantatra ny zava-mitranga eto amin'ity firenena ity ny vahoaka. fantatry ny vahoaka ny ANA (tafika nasionalista Afgan) sy ny manampahefan'ny polisy izay nandray anjara mivantana tamin'ny fampidirana “kôkelikô” an-tsokosoko sy ny mafia. Navadika ho toby fampidirana entana antsokosoko ny tobin'ny minisiteran'ny atitany sy ny tobin'ny polisy. Tsy misy dikany ny rafitry ny fitantanana vaovao sy ny fanovana vaovao raha hampihena ny isan'ireo lasibatry ny mpikomy ao amin'ny firenena. Na izany aza, miezaka mandà ny tsy fahamendrehany izy ireo saingy ho an'ny vahoaka, tsy toy ny zavatra afenina akory izany. Mitombo ny lasibatra noho ny tsy fisian'ny rafitra sy fitantanana mirindra.